Ngabe ilaptop yakho iyahambisana ne-GNU / Linux? | Kusuka kuLinux
Kokuthunyelwe kwangaphambilini kokuthi ungaluthola kuphi uhlu lwama-laptops ahambisana ne-Linux, abasebenzisi abaningi (ngokwami ​​ngibala) bakhulume ngehardware yabo, uhlobo lwabo kanye / noma imodeli ye-laptop, bethi iyahambisana neLinux, ukuthi isebenza ngaphandle kwezinkinga.
Empeleni, esihlokweni uqobo ngikhulume ngama-laptops ami amabili (imayini eyodwa nenye esetshenziswa yintombi yami) nokuthi zombili zisebenza kahle neLinux (i-Debian, Ubuntu, i-ArchLinux), u-Elav usho emazwaneni ukuthi i-laptop yakhe isebenza ngendlela emangalisayo, kahle , Lokhu okuthunyelwe ukuphawula kuma-laptops ethu nokuhambisana kwawo ne-Linux, kanye namathiphu noma ukulungiswa okufanele sikwenze ukuze i-hardware yethu isebenze kahle.
1 ILenovo IdeaPad U510
2 I-HP Compaq tc4400
3 I-HP EliteBook 8460p
ILenovo IdeaPad U510
Le yi-laptop abasanda kuyinika U-Elav. Angiqiniseki ukuthi ithengwe kuphi ngqo, esihlokweni esedlule ngike ngasho ukuthi kunezindawo zokuthenga i-hardware online; ngaphesheya kwezindawo ezisemthethweni zabakhiqizi. Isibonelo, bangathenga amakhompyutha, izingxenye noma izincwadi zokubhalela ku-OLX Uma uvela e-Argentina (njengoba ngishilo, kuyinto efana neMercadoLibre), isigaba se-laptops namakhompyutha sihlangene, ngishiya isigaba samakhompyutha nezinsiza lapha. Nazi izithombe eziningana zefayela le- ILenovo IdeaPad U510 de U-Elav:
Kuhle? 😀 Izingxenyekazi zekhompuyutha ze laptop zingokulandelayo:
Isikrini: 15.6 ″ (Isikrini Esibanzi)
Ukulungiswa: amaphikseli ayi-1366 x 768
Ikhibhodi yezinombolo ne-Backlit.
Iprosesa: Intel Core i5
I-HDD: 1 TB (1024GB) SATA + 24 GB SSD
Imidwebo: Intel HD 4000
Amachweba ama-2 USB 2.0 namachweba angu-1 we-USB 3.0
U-Elav ungitshele, kufanele akhubaze i-UEFI ku-BIOS yekhompyutha ukuze akwazi ukufaka iLinux ngaphandle kwenkinga enkulu. Futhi, njengoba une-SSD + HDD bekufanele uyifomethe ekufakweni kwe-ArchLinux ngaphandle kwephephabhuku:
Lokho angitshele khona:
Ama-SSD adinga ukulungiswa kwezibalo, okungukuthi, ukunikezela kahle lapho imikhakha iqala khona, engikwenze nge-GParted ku-LiveCD, ngoba iyazilungisa ngokuzenzakalela
Njengoba engitshela, konke kusebenza njengentelezi kuye. Into enengqondo, into esemqoka (ngokombono wami) maqondana nama-laptops neLinux yimidwebo, iLenovo ine-chipset ngayinye ye-Intel, ihlanzekile futhi ilula kakhulu.
I-HP Compaq tc4400
Le yilaptop yokuqala ebenginayo, bekuyisipho abasinikeze ubaba ohambweni lwebhizinisi alwenzile. Le yi-laptop ebihamba nami iminyaka engaphezu kwengu-4 yempilo yeLinux 🙂
Izingxenyekazi zekhompuyutha zale divayisi okwamanje zinesizotha, zinesizotha kakhulu, kepha ngo-2008 angisho nokuthi… inganono!
Isikrini se-14 ((4.3, asikho isikrini esibanzi)
Ukulungiswa: amaphikseli ayi-1024 x 768
Umseshi: Intel Core2Duo
I-RAM: 1GB DDR2 DualChannel (kamuva yandiswa yaya ku-2GB)
I-HDD: 320GB (SATA)
Imidwebo: Intel 925
3 amachweba we-USB 2.0
Imodi ye-TabletPC (isikrini sokuthinta ngepeni / ipensela, i-Wacom)
Ngale laptop ngisebenzise ama-distros amaningi, kusuka ku-Ubuntu 6.06 kuya ku-10.04, nge-Debian, ukunambitheka kwe-openSUSE, Centos, njll. Konke ngaphandle kokukhetha kungisebenzele kahle. Ngikhumbula ngicabanga ukuthi kwakuyi-Ubuntu 9.04 ngenkathi befaka i-ext4 nomfanekiso omusha we-Intel osebenze kabi kuwo wonke umuntu, angikaze ngibe nezinkinga.
Inkinga kuphela ebenginayo yimodi yeThebhulethi, enephutha lokuklama noma iphutha. Uma ixhunywe ku-AC (kushintshana okukhona) isikhombisi segundane sihlanya, asiyeki ukuya ngasekhoneni elingezansi kwesokudla, lokhu kwenzeke ku-Linux naku-Windows, ngemuva kokufunda okuningi bengazi ukuthi bekuyiphutha lasefektri lalo lonke uchungechunge tc kusuka ku-HP.
Ngokwami, angisebenzisanga lokhu kusuka kwi-TabletPC, ngakho-ke ngakhipha (noma angizange ngifake) umshayeli we-wacom futhi yilokho kuphela.
Namuhla ilaptop isasebenza, intombi yami ngiyisebenzisa noDebian Wheezy futhi wonke umuntu ujabule kakhulu, kusekhona ilaptop yeminyaka.
I-HP EliteBook 8460p
Lesi ngesami, esinye isipho umngani wakhe wasebhizinisini asinikeza ubaba, ngithathe le laptop (njengoba ngenzile ngeyaphambilini) kahle ake sibhekane nakho, ngiyisebenzisa kangcono 😀
Ihardware yalokhu yesimanje kakhulu:
Isikrini: 14 ″ (Isikrini Esibanzi)
I-HDD: 320GB (SATA) ... (yize ngihlela ukufaka i-SSD)
I-Hybrid Graphics: I-Intel HD 3000 ne-AMD / Ati Radeon HD 6400M
Amachweba ama-2 USB 2.0 namachweba angu-1 we-USB 3.0 (noma ngicabanga kanjalo, kopisha ngokushesha kepha hhayi okwesibhakabhaka hehe)
Ngayifaka le ngosuku lokuqala lwe-Debian Testing, konke kungisebenzele kahle. Ngemuva kwalokho ngafaka i-ArchLinux futhi ngenza yonke into ngaphandle kwe-Bluetooth yangisebenzela, kodwa hhayi ngoba ayisebenzi, kepha ngoba angizinikelanga ngisho ama-neurons ama-2 odabeni.
Njengoba ubona ukuthi inemidwebo ye-hybrid, okungukuthi, i-Intel kanye ne-AMD / Ati. Ngifunde amabhukwana amaningi ku-inthanethi mayelana nokuthi ungawenza kanjani lo msebenzi, ikakhulukazi ukuthi ungenza kanjani umsebenzi owodwa bese omunye uvaliwe, kepha kubukeka sengathi inhlamvu efanayo noma abashayeli bakunakekela lokhu. Lokho wukuthi, ngifaka nje abashayeli be-AMD / Ati ne-voila, eDebian bekungukuthi:
Ngemuva kwalokho dala ukumiswa kwe-Ati:
Ku-ArchLinux ... mmm, njengamanje angisakhumbuli 0_oU, Ngafaka i-Arch 10 ezinyangeni ezedlule futhi angikayifaki kabusha (angiyidingi, konke kuzinzile kakhulu), ngikhohliwe ukuthi ngiyilungiselele kanjani i-Ati, lapho kufanele ngiphinde ngiyifake futhi ngizoba nesikhathi esibi LOL!, Khona manje Nginamaphakeji athi-dri afakiwe ne-radeontool.
Noma kunjalo, ungafaka iphakheji yingaboy ukuthi njengoba ngifundile kuzokusiza ukucisha elinye lamagrafu amabili.
U-Elav umthanda ngempela uDell yize manje eneLenovo, bengilokhu ngingumlandeli we-HP, ngazo zonke izinzuzo nezingozi zayo.
Yimuphi umkhiqizo onayo ohambe kahle neLinux? … Yini oyithandayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Ngabe i-laptop yakho iyahambisana ne-GNU / Linux?
Nge-HP ne-Compaq akuhambanga kahle kakhulu, bengingavele ngithose iqanda ngekhibhodi, angikaze ngibe neLenovo, njengamanje ezinsukwini ezimbili ezedlule ngine-compumax (uphawu lwaseColombia olunama-pcs wengalo) lapho ngisebenzisa khona i-trisquel ngakho-ke ngijabule ngalokho.
Yebo, ngicabanga ukuthi uke wakusho njengezikhathi ezi-3 vele kuma-athikili ahlukahlukene (ngisho i-CompuMAX neTrisquel). Into enhle ngeLenovo, ngaphandle kokungabaza, ukuthi isebenza kakhulu, ibanda kakhulu. ILaptop ayishisi neze, futhi okuwukuphela kwesikhathi eyenzayo lapho idlala ngo-0 AD, lapho izinga lokushisa leProsesa lifinyelela kuma-65 °.
I-hp kimi ayenzanga kahle noma emafasiteleni, leyo reverend shit yamakhompyutha nezinto ze-elekthronikhi, bayazithengisa: X
Alukho usuku oludlulayo angizisoli ngokuthenga i-HP laptop brand HP.
Kulungile, benginelaptop ye-HP ecibilika ngokoqobo kusuka kuzinga lokushisa elifinyelele kulo (bekuyi-90 ° C). Ikhompyutha ephathekayo kamama iCompaq kwakungelinye ihhavini, nayo. Manje into ehlekisayo ukuthi ngine-tablet ye-HP futhi ngenza kahle kakhulu, mhlawumbe inkinga yakho ngama-laptops noma ngibe nenhlanhla kulokhu.
Sep. Into emayelana ne-SSD ukuthi ukwenza konke ukusebenza okungenzeka ukuthi ukwahlukaniswa kufanele kuhambisane. Ngamanye amagama, ukwahlukanisa kufanele kuqale endaweni yememori okuyi-multiple of the erasure size of the SSD (kuye ngokuthi eyodwa noma enye kungaba yi-128, 256, 512KB ...) .. njll. Ngikufunde endaweni ethile, ngakho-ke angazi kahle ukuthi kungani 😛
Futhi ngenisa ishejuli engenayo nephumayo
nge-SSD ngicabanga ukuthi ngiyakhumbula ukuthi icala elihle kakhulu bekuyi-noop
cat /sys/block/sda/queue/scheduler ngakho-ke umhleli uzokukhombisa
ukushintsha isihleli nje
Lowo myalo ubuyela kimi:
elav ngamathiphu avela ku-arch wiki ( https://wiki.archlinux.org/index.php/Solid_State_Drives#I.2FO_Scheduler ) Ngilungisa i-trim ku-fstab futhi ishejuli iyishiya njengoba injalo ngoba njengoba ngiyaqonda manje ithola i-ssd ngokuzenzekelayo futhi ilungiselelwe ukusebenza kangcono.
uma usebenzisa i-SSD bengizoshintshela ku-noop (bengingazi ngezinhlamvu zakamuva) ngoba ukufinyelela kwenziwa ngomugqa we-FIFO futhi lokho kungenye yezinzuzo zale algorithm ku-SSD,
i-cfq isihleli esizenzakalelayo
Kernels yakamuva, ishejuli yeCFQ yenzelwe amamojula wombuso oqinile, ngakho-ke akukho okumele kwenziwe. Kodwa-ke, ngisaqhubeka nokulandela isincomo sokushintsha ishejuli siye kwi-noop, ngoba iprosesa lami, i-E-450, lihamba kancane. Noma imuphi umjikelezo weprosesa engiwunqobayo uhumushela ekuthuthukisweni kokusebenza kimi, noma ngiyazi ukuthi akunjalo kubantu abaningi.
Ngine-Samsung np530u48 futhi ngawo wonke ama-distros engizamile kushisa kakhulu ngenkathi ngamawindi kungenzeki 🙁
UDennis Lopez kusho
Sawubona mngani, angazi noma manje uzobe usuyixazulule yini inkinga noma ushintshe i-laptop, kwazi bani. Noma kunjalo, benginenkinga efanayo ku-HP Elitebook 6930p, ebikade indala. Akekho owake wazi ukuthi anganginikeza kanjani isisombululo, ngakho-ke ngasithola ngedwa. Zama i-distro nge-kernel endala, ngasizathu simbe angikwazi ukukhumbula ukuthi izibuyekezo zakamuva ze-kernel azihambelani nanoma iyiphi enye iprosesa. Ngenkathi izinhlamvu ezindala zisenza, faka ubuntu 12.04.1 noma i-os yokuqala, noma i-linux mint 13, i-debian, noma iyiphi i-distro ene-3.6 kernel iyasekelwa. Noma, ixazulule inkinga kimi. Kwakungekho ezinye izipikha eziyingozi ekushiseni.
Phendula uDennis López
Ngine-BGH i570 enhle ... ethengwe ngabakwaMercadoLibre ngisebenzisa isaphulelo seCyberMonday ..
Ngaphandle kwenkinga ukukhubaza i-UEFI nokubeka i-ArchLinux njengowukuphela kwesistimu .. .. konke okuhle, i-WiFi, umsindo, ividiyo, i-bluetooth..konke .. 😉
Kubukeka kukuhle kakhulu O_O
I-Lenovo Thinkpad Twist. Ikhompyutha Eguquguqukayo.
Ngisebenzisa i-Fedora kuyo futhi yonke into iphelele, ngaphandle kokuthi ukuphinda uzenzele kabusha okuzenzakalelayo akusekelwa lapho isikrini sisebenza sime sibheke phezulu kumodi yethebhulethi, bese kwenzeka futhi ukuthi uma ikumodi yethebhulethi yokulandela umkhondo ngokucindezela isivalo selaptop kwenza igundane lihlanye .
Owokuqala ngayixazulula kancane ngombhalo obizwa ngeMagick Rotation kanti owesibili, ngihlukanisa kancane ikhava yekhibhodi kwimodi yethebhulethi imizuzwana embalwa, nje ngokwanele ukuze iphoyinti lokuthinta lingathintwa nesembozo, ngemuva kwaleyo mizuzwana iphoyinti lokukhomba alisebenzi futhi yeka ukunikeza izinkinga.
Mhlawumbe kungakuhle ukwenza iphrojekthi encane eDesdeLinux lapho umuntu ngamunye engeza amamodeli awasebenzisile futhi akhombise ukuthi baziphathe kanjani ngeLinux. Ngicabanga ukuthi unefomu lapho ugcwalisa khona ukucaciswa komshini (iprosesa, ihluzo, i-hard disk, njll.) Namanye amabhokisi aseduze kwabo lapho ukhetha khona uma kusebenza kahle noma cha (noma ngaphezulu noma ngaphansi), uma uyizamile ngomshayeli wamahhala noma ophethe (noma awunawo umqondo), ukubonwa, njll. Ngize ngicabange ukuthi i-plugin ye-WordPress enezinkambu ezingokwezifiso izokwanela.
Ummm ngifunde ngasikhathi sinye amakhadi wehluzo ama-2? I-AMD ne-intel ?? Bengicabanga ukuthi ngeke ukwenze lokho ku-linux ngokuzenzakalela, ngaphandle kokusebenzisa okunye kwalokhu:
Sanibonani zihlobo. Ngine-HP envy m4-1050la ene-Beats Audio Core i5. Ubuntu 12.04 busebenza kahle, bekufanele ngiguqule ezinye izinto ezinjengeBrightness, uma ithola okhiye bokuyiphakamisa bese behlisa kepha isikrini asibonisanga ushintsho, kepha ukulungisa ifayili bekukuhle kakhulu. Kepha kukodwa nje, Ubuntu bathole konke, iWifi, iBluetooth, i-Usb (2.0 ne-3.0), iWebCam, i-Sound (yize ingenawo wonke amandla weBeats Audio njengakwiWindows) futhi ngaphandle komshayeli ophethe. Ngokuphathelene nokushisa, kushisa njengokujwayelekile ukusetshenziswa, akukho ukulayisha ngokweqile. IWindows 8 ivela efektri, ngakho-ke bekufanele ngikhubaze iSucure Boot ukufaka Ubuntu. Nginazo zombili i-Operating Systems ezisebenza ngokwendabuko, noma kunjalo, ngisebenzisa Ubuntu obuningi :). Ukubingelela okuvela eMexico.
Umngani osuka lapha eSanta Fe, e-Argentina, uthenge incwadi yokubhalela eyi-Panoramic futhi iza no-Ubuntu angayazi nakancane ngayo ... Kepha inguqulo ye-Ubuntu ingu-9.x, iyesabeka impela. Wafika endlini yami ngafaka i-12.04 futhi ngaqala ukumfundisa kancane ukuthi angayisingatha kanjani futhi washiya i-chocha-happy kakhulu- ne-Ubuntu 12.04.
Ngokwethembeka, uma befuna ukwenza imishini ishibhe, babeka uhlelo olusebenzayo olungasetshenziswa hhayi olwesabekayo olunikeze konke okunsomi, kwasala ngesikhathi. Benza ukuthi kwaziwe "ukuthi uhlelo lokusebenza lubi kakhulu" njengoba kusho uzakwabo osebenza nabo.
Ngine-futaba (i-Acer Aspire V5-552G-X414) enombhalo ophindwe kabili we-amd, kusukela kusekhondi lokuqala ebenginalo ezandleni zami ngikhiphe i-windows8 ngaphandle kokuyiqala okokuqala ngafaka i-Archlinux, futhi konke kuyasebenza kuhle, bekungadingeki ukuthi ngilungiselele noma yini ngokuphathelene nakho konke okunzima okusebenza njengentelezi, ayishisi kakhulu, futhi nezikhathi engisebenzisa ngazo i-radeon hd 8750M ukuthi iyiletha ayishisi ize ibe ngaphezu kuka-65C, nezinyanga zayo ezi-5 ezandleni zami kuphela shintsha idiski ye-750G nge-ssd. Ngikushiya isixhumanisi uma kwenzeka unentshisekelo http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834314181 imikhonzo umphakathi omkhulu wase-Fromlinux.
Imodeli: YB35, Sony.
Izici: I-AMD E-450 Netbook, ihluzo zeRadeon HD6320 (iWrestler, i-Evergreen iyahambisana), i-chipset ye-AMD. I-2GB ye-RAM (ithuthukiswe lapha yaya ku-4GB), ne-500GB ye-hard drive (ithuthukiswe nge-256GB SSD).
Izinkinga ohlangane nazo: Kuyindida ukuthi ngibe nezinkinga eziningi ngeWindows kuneLinux. Ukulawulwa kokukhanya kokukhombisa akusebenzi nabashayeli be-Linux abaphathelene, noma neWindows (lapho udinga uhlobo oluthile lwabashayeli, olunikezwe ngabakwaSony). Lokho kusebenza ngokungenaphutha nabashayeli bamahhala.
Izincomo: Ngakho-ke, kungcono ukulayisha ukusatshalaliswa kwanamuhla kule khompyutha, ene-kernel 3.13 neMesa 10.1. Kusebenza kahle.
- Umsindo we-HDMI unganikeza izingqinamba ezithile, ezilungiswa uma umuntu engeza i-clocksource = hpet kulayini we-grub. Leyo pharamitha inconywe kabili kumasistimu anama-processor we-AMD, ngakho-ke kuyasiza.
- I-kernel izonikeza amaphutha mayelana nemodyuli, i-acer_wmi, elayishayo futhi engatholi lutho. Lawo maphutha awanabungozi. Uma ungazifuni, hlela uhlu lwaleso sigaba.
Nginelaptop EMachines D440 futhi ingifanela kahle, konke kuyasebenza
Njengamanje ngisebenzisa iCompaq Presario F700 endala, ene-AMD Athlon 64 X2 nemidwebo yeNvidia, lapho ngafaka khona iSparkyLinux futhi yonke into isebenza kahle kakhulu, ilula futhi ishesha ukwedlula i-W7 yakudala eyayiyifakile (kwashisa futhi kwashunqisa konke isikhathi, ngaphezu kokushwabadela ibhethri ngaphandle kokuphumula). Phambilini benginenkinga ngeManjaro, okuthi yize ifakiwe kahle ngemuva kwalokho yaphahlazeka ekuqaleni, kepha manje ngeSparky efakwe ezinyangeni ezimbalwa ezedlule konke kusebenza kahle.
Sizobona ukuthi kuhlala kunjalo kamuva.
U-Audel Diaz kusho
Ngine-Samsung Series 7 Chronos
I-CPU: I-Intel Core i5
I-HDD: 1TB + SSD ExpressCache 8GB
Ividiyo: INvidia Optimus GF GT630M
Nginayo isikhathi esingangonyaka nesigamu, ngine-boot ebili (i-Win8), ekuqaleni kwakunzima kakhulu ukwenza zonke izilungiselelo ze-samsung zisebenze, ngisebenzise ubuchwepheshe be-optimus, ukusebenza kwebhethri, ukushisa ngokweqile, ukukhanyisa ikhibhodi, kepha nge-Archlinux Kusukela ekuqaleni yonke into ibilokhu ithuthuka, izinzuzo zokuba nezinguqulo zakamuva ze-kernel nabashayeli zingiholele eqinisweni lokuthi namuhla ngonyaka nohhafu kamuva nginomshini osebenza kahle futhi sengingasho ukuthi konke imisebenzi yasembonini iyasetshenziswa, nakanjani ngemuva kokuzama i-Archlinux kakhulu kube yisinqumo sami esihle kakhulu.
Phendula u-Audel Diaz
Ngine-pc efana neyakho, i-chronos chungechunge 7 ene-i5, nemidwebo embaxambili, i-Intel yangaphakathi ne-ati.
Angikwazi ukuphatha, ku-Ubuntu, ukuthi ngingakhetha igrafu ngokusho ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza, noma ngehlise izinga lokushisa le-cpu, noma ngelule isikhathi sebhethri kunoma yini efana namahora ayi-8 ahlala ku-Windows kwimodi ye-eco.
Ngitshele ukuthi iyiphi i-distro nokuthi yikuphi ukulungiswa okwenziwe kuyo.
Ihlala isikhathi esingakanani ibhethri?
Ishisa kangakanani i-CPU?
Ikhibhodi iyakhanya, futhi ungakwazi ukufiphaza ukukhanya?
Izinkinobho zomsebenzi eziza ku-Samsung ziyakusebenzela?
Manje ngine-ASUS K50IJ enezici ezilandelayo:
INKULUMO: 2.20 GHZ - T4400
Amagrafu: Intel GMA X4500M
ISIKHUNGO: 1366 × 768
IBHODI LOKUQALA: IsiNgisi + Izinombolo (Setha Izizwe Ngezizwe ngama-tildes)
I-OS: Ukuhlolwa kwe-Debian 64 bits + XFCE
Iqiniso ukuthi konke kusebenza kahle impela, manje ngilinganise izinga lokushisa futhi kuhamba phakathi kuka-45 no-47 * C ngisebenzisa izinhlelo ezahlukahlukene ezisebenzisa iJava kusuka e-Oracle ngenxa yomsebenzi (ekhaya uma kunesidingo ngisebenzisa i-openJDK).
Okungangisebenzeli kahle ngokuphelele futhi engikuphenyayo kancane ukushintsha kokukhanya okuzenzakalelayo lapho nginqamula ishaja ne-hotkey ukucisha iphedi yokuthinta, ngaphandle kwalokho konke kuhamba kahle (uma kukhona owaziyo isixazululo salokho ngingalwazisa usizo) .
Konke lokhu kubhekwa ukuthi ngikuthenge ngama- $ 120 kumuntu waseMelika othenge enye ilaptop futhi bengazi ukuthi ngenzeni nge-ASUS …………
ungathola ikhambi lapha:
Manje njengoba usho ... kuzofanele ngifakele i-linux yentombi yami. Emshinini wami, oyiLenovo, yazi ukuthi yini okusebenza kahle ... manje, eyakhe iVaio ... ngiyaqiniseka ukuthi ngizokuthola kunzima.
I-Sony VPCF13 kusukela ngo-2010. 16 ″, i7, 8gb inqama.
Kusukela lapho nginayo nge-ubuntu futhi ibilokhu isebenza kahle kakhulu (yize kunokuthile okufana nokukhishwa komsindo we-optical noma umfundi wekhadi angikaze ngizame). Okomsebenzi nokungcebeleka. Umusi ungangiphatha ngazo zonke engizilandile manje.
futhi ku-steam kufanele ukhokhe njalo? (Ngaphandle kwabakhululekile?) Noma ngabe kukhona inqubo yesitayela "yokuqhekeka" njengamawindi?
Sawubona ... unganginika isandla, isixhumanisi noma okuthile kokuthi ungayifaka kanjani i-vpcsc1afm ubuntu ku-Sony Vaio ukuze konke kusebenze kahle. ikhadi levidiyo elihlanganisiwe nezinto ...
Ukubingelela nokubonga !!!!!!!!!!
Ngine-Lenovo Z580, inamawindi 7, ngafaka Ubuntu, ngaphandle kokungabaza ... okuhle, angizange ngisebenzise noma ngisebenzise noma yini, bengikhathazeke kakhulu ngokwenza ngezifiso kunokuthi kungisebenzele. Onke amadivayisi abonwe kimi kahle.
Kuhle, ngincoma uLenovo ukuthi asebenzise neLinux ...
Ukubingelela okuvela eCosta Rica, ngiyakuhalalisela kubhulogi yakho ...
Phew! Yebo, ilaptop yami yangaphambilini yayiyi-Sony Vaio futhi yayihlala inezinkinga ngezindawo ze-GNome, kepha yayilayisha uKubuntu (izincomo ze-ELAV!) Ku-jiffy, kwakuyi-PC enezici ezinesizotha kepha yayanele ukuqhuba uKubuntu kamnandi.
Ngisanda kuthola i-Asus esezingeni eliphezulu futhi iza ne-UEFI enegazi, noma kunjalo nginayo ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, kule mpelasonto ngizoqala "izivivinyo" futhi ngizokutshela ukuthi konke kuhamba kanjani ... futhi mhlawumbe ngisho uyocela usizo ngokufakwa !!! I-LOL
Hawu! I-ASUS, uyithulile 😀
Ngisanda kufika ngoLwesine!
Ngisebenza kahle nge-Acer Aspire 4339, angizange ngihluleke ukuhambisana ne-adaptha yenethiwekhi ye-Broadcom, noma ne-touchpad, ngisho nomqulu oza nawo. Ikhamera, imakrofoni, ikhadi lemidwebo kuncane kakhulu okubangela inkinga.
Ama-laptops angama-95% weWindows ayi-100% asebenzisana neLinux ngaphandle kwamanye ane-Wi-Fi, ikhadi lenethiwekhi namadivayisi wokuthinta kukhibhodi noma amalambu afana ne-laptop ye-Elav
Izibani? Kwenzekeni kumalambu? : NOMA
I-Linux inesici esikhulu futhi lokho kubukeka njengehhavini, ishisa kakhulu i-cpu ne-gpu kungakhathalekile ukuthi iluphi uhlobo lomkhiqizo, kimi inkinga ikwi-DEB ikakhulu, konke okuphuma ku-Ubuntu kubulala ihluzo zakho noma i-cpu, bengine-Mint i-cpu ne-gpu ngama-degree angama-60. Ngezizathu zokonga futhi empeleni uma ungasebenzisi i-pc yezimpawu ngisebenzisa i-AMD, kepha ukushisa kuyinkinga.
Umshayeli we-AMD usebenza kuphela kimi ku-chakra futhi wehlisa kakhulu izinga lokushisa kwe-gpu, e-Opensuse ishayisa nge-kwin, kepha le nkinga ibilokhu yenzeka kusukela ngeLinux 2.6, yize ine-chakra ne-Opensuse i-cpu ihlala phakathi kwama-36 nama-44 degrees futhi Ubukhulu obungama-60 ngenxa yeqiniso lokuthi umshayeli ophethe akasebenzi kahle, ukusebenzisa umshayeli wamahhala we-galium kuyingozi, imidwebo yami ibifudumala.
Bekufanele ngibuyele emafasiteleni kepha kungokwesikhashana njengoba ngithola enye epholile nabalandeli be-gpu, ngincoma ukuthi usebenzise unamathisela oshisayo wase-Arctic noma bazoyosa amaqanda nge-cpu / gpu yakho.
Ngine-PC ye-HP futhi ene-AMD yomibili enezindawo zokuphatha nezamahhala, izinga lokushisa laliphakathi kwama-32 no-41, ngaphandle kwesikhathi sokusetshenziswa nge-sweethome uma udonga lushaywa, kepha njengoba usho, ushintsho lokunamathisela okushisayo Angikwenzi njalo futhi empeleni uhlobo olufanayo lwe-Arctic Silver, i-distro yami Ubuntu 13.10 izibuyekezo zakamuva zabashayeli be-galium zihambe kahle kakhulu.
Angivumi. ILenovo yami njengamanje neLinux isebenza ngama-46 ° futhi kuphela uma ngidlala i-0 AD iyakhuphukela ku-68 °. Impela, lokho kune-Intel neprosesa ye-i5 3337 ..
Ngokuqondene nemikhiqizo, ukunambitheka kwami ​​kungaba kanjena:
I-satellite yami enhle ye-toshiba c645 ihlala i-deluxe ene-linux, idizayina ngaphandle kokuphazamiseka futhi uhlobo lomkhiqizo engibe nezinkinga ngalo lwalune-acer okungenani enezinye izifiso.
I-ASUS Aspire V5 isebenza kahle, okuwukuphela kwento engezansi ukuthi ngama-Ubuntu kernels kanye nama-derivatives kushisa kancane (ngezinkinga zeManjaro 0).
Nginencwajana yami enhle yePost BGH J430 esebenzisa inguqulo yakamuva ye-Ubuntu, angikaze ngibe nenkinga 😀
UToshiba usebenza kahle kakhulu; uchungechunge lweSatellite yilo engiluhlolile muva nje. Ozithobayo.
I-KZKG ^ Gaara, ungayimisa ngokungathi sína ngoba ngizame kaningi futhi iqiniso ukuthi, akukaze kusebenze. Ngizamile kwaze kwaba ikhenela 3.11 futhi ngaphoqeleka ngokuphelele ukuthi ngibeke amawindi ku-PC. Uma uphasa iresiphi, ngizoyithokozela kakhulu. Imishini enginayo yi-HP Pavilion DV6 ene-Intel HD 3000 neRadeon HD 7690M XT, i-Intel Core i7, i-8 GB ye-RAM, i-1 Tera DD, i-Wirele Intel Centrino N 1030.
Ukusetshenziswa kwamandla kanye nokusebenziseka kwebhethri kuthinteka kakhulu, empeleni ngaphoqeleka ukuthi ngithenge ibhethri elisha ngoba enganginalo lathunyelwa ngokushesha okukhulu. Ngilandele yonke imihlahlandlela kuzo zombili izinhlaka zama-arch nezithangami, njengalezo engizithole zingifunanga lutho.
Kukhompuyutha yami yasekhaya, i-ibm slimline, i-netbook kanye nomuntu ozobe eseqophelweni elidala lendawo yomnyuziyamu enginabo abane-archlinux (XFCE, i-GNome Shell neFluxbox ngokulandelana) futhi bangisebenzisela izimangaliso futhi awukwazi ukucabanga ukubekezela ukukwazi ukubeka i-arch yami engiyithandayo kakhulu kuleli qembu.
Ungacabangi ukuthi ngizokubonga kanjani.
Ngiyabingelela futhi ube muhle
Njengoba ukhuluma ngama-laptops ahambisanayo, ngine-desktop engahambisani ne-Linux. Ngizamile ama-distros amaningana (fedora, opensuse, archlinux, amabanga aphansi, i-mint, i-debian, i-ubuntu, ngifaka i-x64 ne-x86) futhi akekho ongisebenzele kahle. Ihlala ilayisha imenyu yokuqalisa, lapho ngikhetha khona ukuthi ngenzeni, noma ukufaka noma okunye, futhi ihlala esikrinini esimnyama esingapheli. Ngiyazi ukuthi bakhuluma ngama-laptops, kepha bengifuna ukungeza lokhu. Ukubingelela nokubonga 😀
Nginayo lapha iToshiba Portege z930 ene-Arch Linux efakiwe futhi isebenza kahle.
Kulabo kini abakhalaze nge-HP Compaq… eminyakeni engu-4 edlule ngithenge iCompaq Presario CQ61, iPentium Dual-Core 2.10GHzx2 T4300 CPU, eyi-64-bit ne-Win7 efakiwe. Ngemuva kweminyaka emi-2 ngakhathala uWin7 futhi ngafuna ukubuyela ku-Ubuntu (eminyakeni embalwa ngaphambi kokuthi ngizame Ubuntu 10.4 nge-Dell Inspiron; lelo Ubuntu alizange libabone abashayeli be-webcam, i-wifi, nezinye izinto ungakhumbuli manje, kepha bekuhamba kahle), manje sengineCompaq Presario ene-Ubuntu 12.04 LTS (i-boot ebili ne-Win7) futhi kusukela lapho ngijabule kakhulu nge-Ubuntu; Kusukela ngomzuzu wokuqala ngibonile KONKE into iCompaq enayo (Amakhadi, i-Webcam, njll.) Futhi AKUKHO okushisayo noma okushisayo njengoba abanye benu besho.
Umkhiqizo wami engiwuthandayo yi-IBM manje eyiLenovo, kepha ngokuzayo ngifuna ukuthenga i-Asus noma i-Acer.
Ngiyabona ukuthi ukuphawula okuningi kuphakamisa izinkinga zokushisa ngama-laptops abo futhi kubasola ku-OS abayisebenzisayo; Manje, ngokuhlangenwe nakho kwami ​​ngiphakamisa ukugcina uhlelo lokupholisa imishini ngaphambi kokusola i-OS. Umklamo wohlelo lokupholisa ilaptop lwenza kube lula ukuthi imicu yendwangu, uthuli nokunye ukungcola kufakwe esitolo, okungasivimba futhi kubangele ukushisa kakhulu kwemishini, okungathi kwesinye isikhathi kubangele ukwephuka okufanayo.
Yize abanye becabanga ukuthi umsebenzi wokuhlanza nokugcina uhlelo lwefriji luyinkimbinkimbi ngokwedlulele kepha empeleni akunjalo futhi uma sithatha izinyathelo zokuzivikela ezidingekayo, cishe noma ngubani wethu uyakwazi ukukufeza, ngakho-ke qhubeka ubone ukuthi ukusebenza kwe imishini yakho ithuthuka kakhulu.
Kuze kube manje ngeToshiba L515-SP4031L isebenze kahle kakhulu (iminyaka emithathu) nangama-distros engizamile awanginikanga izinkinga.
Inkqubo: I-Pentium® Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz × 2
Imidwebo: I-Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (izingcezu ezingama-945)
Imemori: 4 GB
Idiski: 320GB Samsung
I-Wifi: Realtek 8187B
I-Ethernet nomsindo: Intel
1,3 mp ikhamera nemakrofoni
Manje sengine-DELL INSPIRION 5521 enezici ezilandelayo:
INQUBO: I-Intel® Core ™ i5-3337U CPU @ 1.80GHz × 4
I-HD: 974,5 GB
I-GRAPHICS: I-Intel HD 4000 // AMD Radeon (TM) HD 8500M / 8700M
I-OS: Ubuntu 12.04.2 64 bits + Unity 5.20.0
Izinga lokushisa eline-AMD Radeon (exhunywe kusokhethi kagesi) liphakathi kuka-55 no-62. Nge-Intel (ibhethri) lizungeza phakathi kuka-45 no-47 * C kuwo womabili amacala abuka i-YouTube, isibhakabhaka nokufunda ibhulogi.
Yenza izipele, ngoba ngiyisebenzisile, ibhethri elisetshenziselwe ukuhlala cishe ama-6.20jpras.
Buyekeza i-kernel ukuze ubone. 13.3.6 futhi nginezinkinga ngokukhanya (ihlala phezulu futhi ayikho indlela yokuyixazulula) yize inakho (nge 3.5 kernel konke kuhamba kahle)
Ngibe no-3 Asus futhi bobathathu bahambe kahle kakhulu ngeLinux nganoma yikuphi ukusatshalaliswa enginakho kuphela okungahambi kahle ngakunye, uDebian akazange athole iphedi yokuthinta kepha bakhipha isixazululo lapha kudala, futhi enye ye-PC yeza noBuntu efakiwe ... emangalisayo
Sawubona, ngine-laptop ye-ASUS Q500 futhi ihambisana ngokuphelele neLinux, inezici ezilandelayo:
Umseshi: 5rd Generation Intel Core i2.60 XNUMX GHz
I-HDD: 1 TB (1024GB) SATA
Amachweba ama-2 USB 3.0 namachweba angu-1 we-USB 2.0
Ngifake iDebian Wheezy futhi njengamanje ngine-Ubuntu 13.10 enginikeze umsebenzi omncane we-UEFI owonakele :)
Ngingathanda ukuthi ucacise umbuzo:
Lapho Ubuntu buqala, NGIHLALE ngivula ikhibhodi ekhanyisiwe, ngiyayicisha ngisebenzisa okhiye be-Fn, konke kuhle, kepha uma ngiqala kabusha, ivula futhi, othile anganginika isisombululo sokuthi ngiyicisha kanjani bese ngiyivula kuphela Ngiyaqhubeka nini ukuyidinga?
Ngicabanga ukuthi uma ufaka u-0 kufayela / sys / devices / platform / asus-laptop / kbd_backlight kucima izibani. Indlela eya efayeleni ingaba nephutha, ngoba anginayo i-Asus futhi empeleni, i-HP yami ayinayo ikhibhodi ekhanyisiwe, kepha ku- / sys / devices / platform / kufanele kube nenye ifolda equkethe ifayela le-kbd_backlight , uma ufaka u-0 kulelo fayela amalambu ayacima.
Ungafaka okulandelayo ku- /etc/rc.local:
i-echo "0"> / sys / amadivayisi / ipulatifomu / i-asus-laptop / kbd_backlight
Futhi ngombono uma indlela eya efayeleni ilungile bazocisha ugesi.
Kwezinye izindawo ngithola ukuthi umzila uthi:
/ sys / class / leds / asus :: kbd_backlight / ukukhanya
Indlela enhle yokwenza isiqiniseko sokuthi iyiphi indlela yefayela ongabeka kuyo u-0 kungaba ukusesha:
Ngijabule ngeDell Inspiron Duo yami; no-Ubuntu 13.10 nginayo kusukela ngo-2012 futhi isasebenza kahle kakhulu kufaka phakathi i-touch.
Njengamanje ngine-hp pavillion dv5 1535 es, engaphezu kweminyaka emihlanu, futhi i-linux isebenze ngaphandle kwezinkinga kusukela ekuqaleni nge-debian ne-fedora, okuyiyona efake manje.
Isikhalazo kuphela enginaso ngaso ukuthi siyashisa kakhulu, kusukela ngosuku lokuqala, kodwa kulokhu engitshelwe ukuthi kuyinkinga ejwayelekile yama-laptops e-hp. Okungenani bekuyiminyaka emihlanu edlule lapho ngithenga okwami.
Ngine-1 Toshiba Satellite Pro P200 - 15W enama-gig ama-4 enqama, (yafika nama-gig ama-2 kepha into yokuqala engayenza ukukhulisa inqama), ama-hard drive ama-2 wama-gig angama-200 lilinye, ihluzo ze-ATI Radeon HD 2350, ne-17 ″ isikrini, NgeLinux Mint 9 i-bluetooh ayisebenzi, (kepha njengoba bengingayisebenzisi bengingenandaba), futhi manje ngeLinux Mint 13 Cinnamon isebenza kahle ...
Ngine-netbook, i-Toshiba NB100 - 12S, engibuye ngayandisa kuyo inqama lapho nje ngiyithenga kuleli cala yaya kuma-gig amabili, futhi isebenza kahle nge-Mint 2, futhi manje iqhubeka ngokufana neMint 9 Umlingani
I-HP Pavilion Ultrabook 14, ihlolwe nge-Ubuntu 12.04+ neFedora 20 ngaphandle kwezinkinga.
Ngine-Samsung nc 110 netbook futhi ngazama uKubuntu manje sengine-lubuntu. Ngebuntu isebenze kahle kakhulu bengingenankinga kepha ngishintshele kuLubuntu ngoba ilula futhi i-netbook ayinamandla amaningi wevidiyo: P. Kepha kuyizinkinga ezinhle eziyi-0 ngeLinux enhle.
Phendula ekuziphendukeni kokuxhumeka
Ngihamba ngeLenovo Z400 Touch, kepha kuze kube ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngibe neCompaq CQ56. ICompaq idlule kuwo wonke ama-distros ebengiwasebenzisa futhi ayikaze inginike nkinga eyodwa. Qhubeka usebenzise i-Arch njengamanje. ILenovo ifike neWin8, kepha imizuzu engama-30 ngemuva kokuyikhipha ebhokisini bengivele ngiqala nge-Arch USB. Ngibe nezinkinga ezithile ngeTouch kodwa zaxazululwa ezinsukwini ezimbalwa ngokuvuselelwa kwe-kernel 3.12 futhi kuze kube manje isebenza kahle kakhulu.
Futhi yebo, njengoba u-Elav esho, umshini ubanda kakhulu. Ngiyayithanda 😀
Ngincamela uToshiba ngoba kulaptop ngayinye engiyifakile i-GNU / Linux angizange ngibe nezinkinga, konke kusebenza okokuqala.
Emathangeni empahla yami:
I-Toshiba Satellite l305-s5955 konke kusebenza kahle kakhulu, noma ngabe ufaka yiphi i-distro.
I-Asus Eee PC 1001PXD, inezibiliboco njengamanje futhi yenza kahle.
I-Sony Vaio SVF15 yokusetshenziswa okunzima ine-Win 8 ne-OpenSUSE efakwe ku-Dual Boot futhi isebenza ngokumangalisayo (Ku-Win nginezinkinga ezithile, kepha ku-OpenSUSE angikaze ngibe nayo noma ilenga noma kwenzeke izinto ezixakile).
Emikhiqizweni engixabene nayo bekukhona ne-HP kanye nabashayeli bayo bezintambo ezingenantambo, yize njengamanje angazi ukuthi kunjani kulokhu.
Ngine-laptop ye-Dell Latitude E6410 futhi ihamba kahle kakhulu ne-Linux, ngifake ama-distros amaningana afana ne-Fedora, Ubuntu kanye nezinye, iManjaro njll.
Kimi Ngokwami blog ngibhala ngama-distros nama-laptops , ama-netbook lapho ngike ngazama khona ama-Linux distros ahlukile, kulabo abafuna ukwazi ukuthi imodeli yabo iluqhuba kahle yini uhlelo lwepenguin.
Abakhiqizi: Silicon Graphics, Inc. kusho
Ngikushiya isikhundla ngokususelwa kokulandelayo (kulabo okukhulunywe ngabo ngibe nezimbalwa zazo):
1.- IPanasonic Toughbook (Matsushita).
2.- iLenovo ThinkPad T / W / X.
3.- Dell Precision / Latitude
4.- iKohjinsha (okwamanje ivela e-Onkyo).
Noma ngubani okuqinisekisayo uzokwazi ukuthi sikhuluma ngani.
Phendula ku-Silicon Graphics, Inc.
Benginayo (futhi senginayo, kepha manje intombi yami isebenzisa) i-HP TC4400. Isikrini sayo akuyona i-14 ″ kepha yi-12.1 ″. I-RAM yayo iyanwetshwa ifike ku-4GB. Mayelana nenkinga yesikhombi esingaqondakali, ngiyazi ukuthi kuWindows bekukhona ukulungiswa okukhishwe yi-HP. Ayiyilungisanga ngokuphelele inkinga, kepha ibushelelezi kakhulu. Ku-Linux akukho ukulungiswa, kepha ekusabalalisweni okufana neManjaro i-laptop isebenza sengathi ifakiwe, ngoba iyakhathaza kakhulu (njengaku-Windows ngokulungiswa noma nangaphansi). Ku-Mint naku-Ubuntu kuyabulala.
Kulabo abangasebenzisi imodi yokuthinta, kungakuhle ukuthi ukhiphe umshayeli we-WACOM (into ebengingakwazi ukuyidela ngokuzinikela ekudwebeni) futhi inkinga inyamalala ngokuphelele.
UFrederick salazar kusho
Okwamanje ngenza okuhle nge-Acer Aspire S3 391 yize inesici esisodwa ne-Ubuntu 13.10 futhi lokho wukuthi angikwazanga ukulawula umphathi wokukhanya kwesikrini, konke okunye kuzogcwalisa uhlelo lusebenza njengentelezi nge Unity futhi okuhle kunakho konke kunikeza isitayela nobukhona, bobabili bayaphelelisana
Phendula uFrederick Salazar
I-Sony Vaio 11 ″ AMD E-450 APU Radeon Graphics
Konke kuhle nge-openSUSE KDE 13.1! (Ngithole kamuva ukuthi i-AMD inguNozakwethu weNovell.) Ngizamile iMint 13-15 ngaphambili futhi, ngaphandle kweMint 13 nephutha elingajwayelekile kakhulu lokuxhumeka kwe-inthanethi, bekukuhle kakhulu.
Kusuka efemini kuza neWindows7 Starter.
Ngibe nezinkinga zokufaka iMageia 3 neCanaima ...
Sanibona ozakwethu !!
Noma ngubani uyazi ukuthi angayisetha kanjani indawo yokulandelela yeLenovo Thinkpad L530 kuLinux?
melek impisi emhlophe kusho
Uyazi muva nje ngiye ngazama ukufaka i-zorin os 8, i-zorin os 6 ku-toshiba satellite c655 futhi yize iyifakile, ayizigcinanga izinguquko, ayingivumanga ukuthi ngilande amaphakethe olimi nge-terminal, noma ngivule isiphequluli noma yini, noma ukulanda esikhungweni sesoftware kodwa ithanga lami eliyisithambo sesethelayithi lesikhala sine-zorin os 8. Ucabanga ukuthi kungenxa yalokho?
Phendula kumele impisi emhlophe
Bambelela ku-netbook kahulumeni, eyayihanjiswe e-Argentina, nginayo futhi iyipayipi
I-HP Pavilion g4-1371la
Iprosesa ye-AMD VISION A4 2.0 ghz (2 cores)
Imidwebo: I-AMD radeon HD 6480G
I-HDD: 500 GB.
I-OS: Ubuntu 12.04 ifakwe kuqala.
Isebenza ngokumangazayo nge-Ubuntu nange-Manjaro 0.8.9 kde, ukukhubaza ukugqwayiza kwedeskithophu kukhulisa kakhulu ukusebenza kwayo.
Nginayo leyo futhi ngeshwa ngemuva kokuvuselelwa okungaphumelelanga angitholanga abashayeli be-bluetooth kodwa ngaphandle kwalokho kulungile
Ngangine-laptop ye-LG (yebo, i-LG) eyayine-processor ye-Pentium M, i-80 GB ye-HDD ne-1 GB yeRam. Ngibe nayo iminyaka embalwa ngaphandle kwenkinga ngeXubuntu 8.04 yaze yafa i-HDD futhi ukusuka lapho ngayiqala ngePuppy Linux evela kwi-USB futhi yayihamba kahle kakhulu (nge-HDD efile nekhadi lemidwebo elehluleka kwesinye isikhathi: D). Ngibe sengizitholela i-HP TX2, okuthengwa okubi kakhulu emhlabeni ngoba kuhlale isikhathi esingaphezudlwana konyaka (ibhodi lomama lancibilika ngenxa yokushisa ngokweqile nediski yokudlula yancibilika). Manje ngine-Lenovo z360 (i-core i3, i-500 GB HDD) esontweni eledlule ebinenkinga engajwayelekile (ngemuva kwesikrini esiluhlaza okwesibhakabhaka, i-3GB yeRam yenzeke yangithola i-1 GB) futhi i-W7 ayiqalanga ngalutho ngakho ngafaka iXubuntu 14.04 futhi ibisebenza kahle, ibuye idlale namavidiyo we-720p. Ngishintshe induku engu-1GB ngafaka eyi-2GB futhi umshini undiza ngokoqobo. Angikaze ngizame namanye ama-distros kulo mshini, kwi-LG ngiphinde ngazama nge-Mandriva, i-PCLinuxOS ne-Linux Mint futhi bengisebenza kahle, i-HP nganoma iyiphi i-distro yayiyi-oven. Manje sengilande iFedora (inguqulo ye-XFCE) ne-OpenSuse ukubona ukuthi, mhlawumbe ekugcineni ngizoqala ukubahlola.
Ngine-HP elitebook 6930p, engathokozi ngawo wonke ama-distros engizamile ukuthi ishisa kakhulu. Ukubuka nje ividiyo ku-YouTube, kungumshoshaphansi, ngizamile Ubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Mint 17 cinnamon, Debian, Fedora 20, Kali, Elementary. Akekho onginike imiphumela emihle. Angazi ngenzeni. Haha njengenjwayelo inkinga yamazinga okushisa. Ukube bekungengenxa yalokho ngiyayithanda le laptop ngangiyidayisela ideskithophu eyodwa. Noma enye imodeli. Ku-Windows isuka ku-28 ° iye ku-32 ° kanti nge-Linux isuka ku-38 ° iye ku-65 ° engeyinhle futhi engaqeda izinto ezilimazayo. Angifuni ngempela ukuyeka iLinux.
Ngine-laptop ye-Dell Latitude 6410 lapho ngafaka khona inqwaba yama-distros, noma ngike ngazama i-hp eminingi kwimodi ebukhoma ye-usb futhi ihamba kahle kakhulu. Kepha engikuthanda kakhulu iDell ngobuchwepheshe be-intel. Anginankinga.
Ungabona lapha amamodeli engiwahlolile.
Ngine-notebook ye-hp i-HP 14-d040la evela efekthri ene-Ubuntu futhi ngiqagele ukuthi i-wifi ayisebenzi ku-linux. Angikaze ngenze lutho ngakho sengifake konke hhayi lutho. umshayeli ovela ku-kernel.org akasebenzi. isebenza kuphela ngekhebula futhi ihamba kancane. uma wazi okuthile ungibhalele. lisboa.wilmer@gmail.com
Yima ngesithangami sethu lapho uzothola ukwesekwa okungcono .. 😉
Ngithenge i-HP Beats Special Edition 15z-p000 CTO, ingabe i-Linux mint debian izosebenza kahle?
nge-ubuntu ibona konke futhi isebenza kahle kakhulu
u-cun debian akayiboni i-wifi.
Phendula u-ariel fernandez
Yini i-linux okufanele ngiyisebenzise uma ikhompyutha yami ingumona we-hp m4 1050 ngiyifunela kuphela izinto ezibaluleke kakhulu zehhovisi ezibheka iposi futhi ngasikhathi sinye zivikelwe
Ngine-HP 14-d040la Notebook PC, eza ngokujwayelekile nge-win 10. Ngibeka Ubuntu 14.06 kuyo kepha i-wifi dam ihamba kancane futhi njalo lapho ngixhuma isibonisi sangaphandle nge-HDMI i-LAPTOP iyahlanya, izifundo zihamba kancane zishiya ukuvuka kwayo futhi kufana nokuthi nginenkinga yokuphatha i-RAM… ..ngingasebenzisa usizo